Okuwasha izitsha - imishini elula kakhulu futhi ezingokoqobo. Zuza Imishini enjalo abaningi namuhla. Umklamo ayinzima zabo futhi kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Nokho, imithetho ekusebenzeni zalamaqembu.I athobele zonke kunesidingo. Yiqiniso, kumayelana imishini ngokuphelele zonke abakhiqizi, kuhlanganise owaziwa.
Imithetho eyisisekelo okusebenzela yokugeza izitsha
Ngakho ake uqale ukubhekana nendlela yokusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha. Kuphoqelekile ekuqhubeni lolu phiko kumele kuhambisane nemithetho elandelayo:
Awukwazi wafaka amapani ngobhasikidi amabhodwe nge izingcezu ezisele ukudla kuwo. It is hhayi Kunconywa ukuba sinezele njengoba abamukelayo. Kulo mBhalo, etholakala eduze komunye nomunye izinto nje musa promoyut.
Noma ngabe zinkulu noma kakhulu izitsha ezingcolile ngokuvamile ibekwe kubhasikidi ephansi, futhi ezincane noma zintekenteke kakhulu - kuya phezulu. Lena enye yezinhlobo ezingu izimpendulo main yombuzo mayelana nendlela ukusebenzisa Electrolux Umshini wokuwasha izitsha "Ariston", "Sigmund futhi Stein" nokunye. D kahle. On kanjani ngokunembile ulandela lesi siphakamiso, ngokwezinga elikhulu incike nekusebenta budedengu ikhishi izitsha.
Imimese benamakhala ucacise spoon isibambo ibekwe phansi. Imigudu kanye netintfo pointy abukhali - ipeni up.
Ladles, skimmers, nokunye. D. Can ibekwe nendawo phezu kwesitha.
Zonke amathangi - amapuleti, amabhodwe, izinkomishi, njll - .. Ingabe efakwe esiphendula esibhekisa phansi.
Emnyango Umshini wokuwasha izitsha ivaliwe kuphela ngemva kovivinyo kanjani izindwani sebehamba ngokukhululeka besuka ezweni.
Ngokulandelayo, ake sibheke indlela yokusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha ngemva yokugeza izitsha wokuhlanza umjikelezo. Donsela nezinkezo, amapuleti izibuko ngokushesha ngemva kokumisa iyunithi akukwazi. Kufanele ulinde okungenani amaminithi ambalwa. Ngesikhatsi kulandzelwa lendlela, dishware esomile cool. Endaweni yokuqala kungcono ukuyikhipha amapuleti okuzikhulula kusuka phansi isitsha. Iqiniso liwukuthi emva ekuthatheni obhasikidi ungakwazi uthele amanzi kancane. Lapho elingenhla ikhefu umamukeli wokuqala, kuyadingeka ukuna isidlo aphansi.
Indlela ugeza izitsha zakho hhayi ezingcolile kakhulu
Umbuzo kanjani ukusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha, kuhlanganise encishisiwe futhi ngaphandle kwalokho, indlela ukukhetha imodi yokuhlanza. Ngo yokugeza izitsha yesimanje ngokuvamile izinhlelo eziningana. Iningi labo, ngokwesibonelo, isici zangaphambi ukugeza. It ngokuvamile lisetshenziswa uma kungekho inombolo ezanele izitsha ezingcolile kumshini umthwalo omningi. Lokhu kuvimbela izinsalela zokudla ukuze prisyhanie amapuleti kanye nezinkomishi. Uma izitsha uzobe uyithayiphe impela eningi, ungasebenzisa kwimodi ejwayelekile.
Futhi, yokugeza izitsha eziningi zalezi zinsuku abe okusheshayo ukugeza umsebenzi. Ingasetshenziselwa ukusebenza izitsha hhayi ezingcolile kakhulu.
Umshini wokuwasha izitsha: indlela yokusebenzisa ukuze bahlanze izitsha okunamafutha
modi kakhulu singcoliswe noma sibe namabala izitsha amafutha, nezinkezo namapani zinhle kakhulu ukusebenzisa pre-cwilisa. Uma nokugcina izitsha ngamanzi nge yokuwasha isikhathi esithize kungasizi, ungasebenzisa uhlelo "Waze wangcola bo!". Kulokhu, yokuhlanza oyokwenziwa cyclically - ngokuphindaphindiwe.
Abanye onobuhle zenzelwe kuhlanganise wokuhlanza izinto zintekenteke kakhulu, ezifana crystal izibuko. Ezisetshenzisiwe le njongo ibizwa ngokuthi "wokuwasha obucayi".
Nkinga amanzi kusukela umshini
Uma kudingeka, esimweni imishini zokuthutha, isibonelo, hambisa, kufanele kuqala uzilungiselele. Okokuqala, ukuphuma emotweni uzodinga sokukhipha amanzi. Inqubo efanayo Kwenziwa futhi, uma kunesidingo, ukulungisa iyunithi. Lokhu kwenziwa kakhulu ukumane:
Ngakolunye uhlangothi ukugqoka amagilavu zokuzivikela.
Indle kusukela yesikhuphukeli noma ugibe unqamule abakhwabanisi imishini hose.
Ukuphela khulula yalo ibekwa indishi.
Ukuze uyeke ukugeleza kwamanzi, hose ngikuvuse nje.
Ngakho, manje wazi indlela yokusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha. Sinazo zonke imininingwane embozwe imithetho eyisisekelo ukusebenza kwawo. Kodwa akugcini lapho. Ezinye izinto ukusebenza zalamaqembu.I asikwazi ukwenziwa. Ngakho, it is hhayi Kunconywa ukuba kugezelwe Umshini wokuwasha izitsha:
Crystal namabhodlela zokuhlobisa kwenzeka ukuthi imodeli asifaki wash olubucayi.
Imimese, izimfoloko nezinkezo nge izibambo lokhuni noma ithambo.
Soft nezipakupaku futhi amabhodlela.
Izinhloso adonirovannogo aluminium.
Indlela bandise nokuphila Umshini wokuwasha izitsha
Manje ake sibone ukuthi ukusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha ungasiphuli ke. Ngesikhathi kokuhlinzwa, iyunithi akukwazi:
Kakhulu overload ke.
Vumela ukungena umshini noma iyiphi imithi yokususa ingcekeza elenkani.
Sebenzisa amathuluzi yasendlini, eyenzelwe yokuhlanza mathupha.
Vumela ekusebenzeni imishini ngaphandle kokuzalwa usawoti. Kuyadingeka ukuqapha khona wawo esitsheni ezifanele.
Ukuvula umnyango ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ngaphambi wenze lokhu, qiniseka ukuthi ulinde stop egcwele izindwani.
Ngemva ngamunye ugeza izihlungi kudingeka ukuba zihlanzwe.
I evele elingaphandle umshini kufanele njalo bahlanza ngendwangu emanzi.
Ungazami ukulungisa imoto eziphukile ngokwabo.
Le mithetho - kuba impendulo ewujuqu umbuzo indlela yokusebenzisa Bosch Umshini wokuwasha izitsha "Ariston", "Electrolux" futhi iyiphi enye brand.
yokugeza izitsha Modern - imishini elula futhi kunengqondo. Abalimala lapho ukusebenzisa kwabo cishe ayinakwenzeka. Nokho, izinyathelo zokuphepha lapho ukuwasha izitsha athobele zalamaqembu.I Yiqiniso, kusadingeka. Kulokhu, imithetho zimi kanje:
Ngaphambi, ubhapathizelani, izandla zakho emanzini nge yokuwasha ziyoncibilika, qiniseka gqoka amagilavu zenjoloba.
Uma uvala umshini ngesikhatsi operation ngaphambi kokuvula umnyango, linda ukupholisa okuqukethwe.
Ningathinti Ukushisa element ngesikhatsi kokuhlinzwa.
Esimeni umshini ukuwohloka kufanele inqanyuliwe amapayipi futhi uxhumane isikhungo service.
Xhuma iyunithi ukuba earthed.
Sidinga ukuhambisana nale mithetho kwebhizinisi lapho uqhuba imishini yanoma yimuphi umakhi. Kumayelana kuhlanganise, ngokwesibonelo, futhi umhlangano ethandwa kangaka, njengoba "Bosch" Umshini wokuwasha izitsha. Indlela yokusebenzisa imishini, "Ariston", "Electrolux", "Sigmund futhi Stein," kanjalonjalo., Futhi kuncishiswe ingozi yokulimala esiphansi, manje wazi kahle.
Indlela yokuthuthukisa ukusebenza kahle
Ukuze kuzuzwe ubumsulwa esiphezulu izitsha, amanzi kungaba ukungezwa insipho (surfactants). Ilayisha wawayisa dispenser ekhethekile ezakhelwe umnyango. Basuke ifakwe ngokuphelele yimuphi Umshini wokuwasha izitsha. Indlela yokusebenzisa insipho kahle? Asivume kanye nalo.
Yiqiniso, yokuwasha kufanele kuqala ukhethe okulungile. Sebenzisa Umshini wokuwasha izitsha izihlanzi ekhethekile kuphela, ngokuvamile liquid noma powder. Futhi isendalini ungathola ongakhetha amaphilisi yokuwasha. insipho okunjalo ezibizayo, kodwa kulula ukuyisebenzisa. Phela, uma isicelo sabo akadingi lutho ukukala ingilazi noma spoon. Ezinye amaphilisi ingxube we yokuwasha, usawoti ukuvuselelwa kanye uxubha usizo. Lona khetho ephumelela kunazo.
Isimo emotweni ukungezwa amanzi ngokushesha yagijimela isidlo. Ukusebenzisa kwabo ihlinzeka sokungabi nhlobo streaks emva omiswe. Yiqiniso, usizo hashaza angathengwa njengoba ithuluzi ezimele.
Uma umshini kuyekile ukusebenza
Kulokhu, ngaphambi kokushaya wizadi, qiniseka ukuthi stop ayibangelwa imbangela bekhohlisa, noma nje ukunganaki akho. Uma imishini ngokuzumayo saphela umsebenzi, kumelwe siqale hlola:
Esingakaze sidonse noma ubani-plug ikhaya umshini kusuka lapho uphuma khona odongeni.
Ingabe ZhEK amanzi zikhutshaziwe.
Ngokuqina evala umnyango iyunithi.
Ingabe izitsha ukulayishwa emshinini.
kahle kanjani ukubeka umbuso.
Ingabe izihlungi avimbekile umlomo wombhobho noma impeller.
Kungani izinto wageza ezimbi?
Ngezinye izikhathi emizi nesithakazelo indlela yokusebenzisa lisebenze "Siemens", le Bosch, "Sigmund futhi Stein" nokunye. E., Ngesizathu nje ukuthi amapuleti lezinkezo ukuthi nje iphume. Kulokhu, yebo, akusiwona mayelana izinga abampofu imishini. Izizathu ukwehluleka imali ngokusebenzisa izakhiwo eyaziwa brand ngokuvamile ihluke kakhulu. Kungase kube eziningana. Ngokwesibonelo, umuntu akufanele alindele yalokho okuhle kakhulu uma kwenzeka ukuthi ezindongeni amapuleti, nezinkezo namapani ngenkathi kulayishwa imoto wahlala lula ukususwa, noma umnikelo wokushiswa phezu ukudla. Ngezinye izikhathi izitsha hhayi wageza, futhi ngenxa ngokungalungile abakhethiwe engaqondile hlelo. Kulokhu kufanele uzame omkhulu yokuhlanza umbuso. Kubi usule izitsha futhi uma ukulayishwa emshinini kakhulu.
I Imibhobho esemzimbeni we impeller, njengoba kushiwo ngenhla, kufanele ahlanze kaningi ngangokunokwenzeka. Uma avimbekile, kungase futhi kuthinte kakhulu nekusebenta wokuhlanza izinto, njengoba izindwani ngeke spin kancane noma ziyeke ukusebenza.
Okuxoxwe ngazo kulesi sihloko, imithetho yokusebenza imishini efanelekayo lokubolekwa ngokuphelele yimuphi umkhiqizo. Indlela yokusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha "Ariston", "Bosch" futhi iyiphi enye onobuhle, kanjalo manje wazi. Ukuthembeka kanye kalula yokusetshenziswa - wukuthi Yiqiniso, ezahlukene hardware brand. Uma isimo sakho sihambelana nemibandela zonke izinhlinzeko zalo ukusebenzisa kwayo ubuchwepheshe, izitsha zakho uyohlale ihlanzekile ngokuphelele, futhi iyunithi ngeke lihlale isikhathi eside kakhulu.
Electrode for cast iron, izinhlobo zazo kanye ukubaluleka inqubo Welding
Ukuya ku-Bryansk: izinto, izindawo ezithakazelisayo nezibuyekezo
Carpaccio of inyama yenkonyana: iresiphi
Gastroenteritis ezinjeni: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Winter Wedding: Amathiphu
I-Volkswagen Passat B6: imininingwane kanye nezithombe. Ukubuyekezwa kwabanikazi be-VW Passat B6
Dress kwekhulu le-19 (isithombe). Indlela agqoke owesifazane ngekhulu le-19